ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: "ရမ်ဘိုနှင့် သူတော်ကောင်း တသိုက်"
လူကြားကောင်း ပရိတ်နာ ဆိုတာ သွားသတိရမိတယ်။
ရမ်ဘိုအကြောင်း ဝေဖန်တာ ကြားနေရတာ စိတ်ထဲမတင်မကျနဲ့ ဘာပြောရမှန်းမသိ၊ ခုတော့ ကိုပေါက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စား(မှားတယ်၊ မှန်တယ် မဟုတ်ပဲ ရပ်တည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့) ပြောပေးလိုက်သလိုပါပဲဗျာ။
စစ်အစိုးရလက်အောက်ရှိ မြန်မာပြည်သည် သိက္ခာကျစရာ၊ရှက်စရာမကျန်လောက်အောင် နိမ့်ကျနေပြီးဖြစ်သည်။
ဤဇာတ်ကားကြောင့်တော့ပိုထူးပြီးရှက်စရာဖြစ်မသွားပါ။ဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေအမှန်တရပ်ပို၍ ဘွင်းဘွင်းကြီးပေါ်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်။အထုတ်ဖွင့်ပြသမို့ရှက်သည်ဆိုလျှင် အာဏာစနစ်အမြစ်ဖြုတ်တိုက်ထုတ်တတ်ရေးတွင်တပ်အားသမျှပါဝင်ရန်သာရှိသည်။သို့မှသာသိက္ခာရှိနိုင်ငံတခုအဖြစ်ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မည်။ယူတတ်လျင် ဤဇာတ်ကားသည် မြန်မာတွေအတွက်သတိပေးတတ်လှန့်သံပင်ဖြစ်သည်။
"live for nothing..or die for something"
ဟားဟား နောက်ဆုံးတော့ အောင့်ထားလို့မရတော့ဘူးမှတ်လား
Min Suu said...
ရှင်းအောင်ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုပေါ့
အဲဒီလူတွေက ရန်ငါစည်း မပြတ်သေးတာ လို့မှတ်...
မှန်ပါတယ်ဗျာ၊ သိုပေမဲ့ ဆူညံသံတွေရှိတာကိုလည်းထားပါတော့
ကြားရ၊ဖတ်ရတဲ့အထဲမှာတော့့Rambo ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့
Overseas Burmese Patriots ကကောင်းကောင်းလိုင်းကြောင်းမှန်
ထက်၊အလုပ်လုပ်ရင်းညီညွတ်ရေးဆိုတာဘာလည်းလို့လုပ်ပြသွားနိုင်လို့ ပါ၊
လုပ်သွားသော Movement မိူးကို ဗမာရှိသောနိုင်ငံတိုင်းမှာလုပ်နိုင်ခဲ့ ရင်ပြန့် 
သတ်တိုက်ပွဲအတွက် စုစည်းညီညာမှုကို ပီပီပြင်ပြင်နှင့် ကြီးမားသောအထောက်
ပေးလို့ရတဲ့ credit အကုန်ပေးလိုက်တယ်
Well I dont like the fact that they are portarying Karen as Christians, KNU might be dominated by Christians but majority of Karens are buddhists. So while KNU is practising warlordism as much as Burmese army does, it is stupid to praise that movie however it is an action film.
သွေးထွက်အောင် မှန်ကန်သောကြောင့် ကဂျီကျဂျောင် ကျသော အမကြီး မသဒ္ဓါပင်..ဖြည့်စွက်ရန် စကား မကျန်တော့ဘဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် ကျေနပ်စွာ ပြန်သွားပါကြောင်း။
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒီသူတော်ကောင်း တသိုက်နဲ. တော့ ခက်ကုန်ပါပီ။ တယောက်ကလည်း သတ်ပြီးရင် သစ်ပင်ပေါ် မခြိတ်ခဲ.ဘူးနဲ. ရာဇ၀င် ဒုတ်ထမ်း ပြော.... ဟောနောက်တယောက်က မြန်မာ့ဂုဏ်သရေ ထိခိုက်တယ် ပြော.... ဟုတ်မှာပေါ့လေ အပြည်ပြည်မှာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တွေမှာ ဒို. မြန်မာနိုင်ငံ ကို ကြောက်နေ ကြရတာ တွေ ..... ပြီးတော. တယောက်က ဆို ပြန်ရော Missionary တွေနဲ. NGO တွေတဲ့ ...... မြန်မာပြည် ကို မ၀င်စေချင်ရင် တားလို. ရတာ ဘဲဗျာ....... စားစရာ မရှိတဲ. လူတွေကတော. ဘာ ဘာသာလဲ အရေးမကြီး တော. ဘူး ဗိုက်ပြည်. ဖို.အရေးကြီးတယ်.... ဗိုက်ပြည်.မှ အသက်ရှင်မယ်ဗျ။ ဒါတင်ဘဲလား မဟုတ်သေးဘူး.... နောက်တယောက်က ဆို ပြန်သဗျ..... အိမ်ဖော်တွေတဲ့..... IT ခောတ်ကြီးမှာဗျာ..... သတင်းနောက်ကျနေပြီ....... ဘွဲ.ရ မြန်မာ အိမ်ဖော်များတဲ....... တော်သေးတာပေါ....... Singapore မှာ မြန်မာ Engineer တွေ Nurse တွေ Technician တွေ Accountant တွေ ကယ်ပေလို. သါပေါ့................ အပြည်ပြည်မှာ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ထွန်းတောက်နေပေလို.ဘဲ.......
ဘါတွေပြောပြော......Singapore က ရတဲ့ အခွင်.အလမ်း အသုံးချ နိုင်တာ ဂုဏ်ယူတယ်။ အခြား ပြည်ပရောက် မြန်မာများ လည်း ကိုယ်နေနေတဲ့ နိုင်ငံ မှာ နမူနာ ယူကြ လိမ့်မယ်လို. မျှော်လင့် ရင်း
လာရောက်ဖတ်ရှုကာ မှတ်ချက်ပေးကြသူအားလုံးအား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
BRAVO ,KO PAW AND OTHER MYANMAR IN S'PORE.
မိုက်၏၊ ကြိုက်၏၊ ထို့ကြောင့်တခါတရံတွင် ကိုပေါအားကျွန်ုပ်ချစ်မိတော့၏။
ရမ်ဘိုက အက်ရှင်မင်းသား ဆိုတော့ အက်ရှင်ကား ရိုက်မှာပါ။ ဒါသူ့ လုပ်ငန်းဘဲ။ မြန်မာပြည် နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းမဧုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံ နောက်ခံထားပြီးရိုက်ယင်လည်း ငွေကရမှာဘဲ။ တခုတော့ရှိပါတယ် သူလုပ်စားချင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးဗျာ...။အရိပ်အရောင်တစ်ခုကို သူပြလိုက်တာပါ...။ဖွလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။
မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာမြေမှာနေပြီး ပေါ်လစီ ဖားကားတွေရိုက်တဲ့ မြန်မာသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ စာရင်
အတူတူပေါ့ဗျာ...။ ရမ်ဘိုကိုလည်း ရုပ်ရျင် ဘလော့ဂ် ဂါတစ်ယောက်လို့နားလည်ပေးကြည့်ပါ..။
သံသယစိတ်တွေ ၀င်ခဲ့မိပြန်တယ်။ ဟဲ ဟဲ...ငယ်မူပြန်သွားတယ်။
ကိုအင်န်ဇက်...ဒါပေါ့ဗျာ။ ရမ်ဘို ပထမ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာတုန်းကလည်း တခြားတိုင်းပြည်တွေကို နောက်ခံထားရိုက်တာပါဘဲ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျနော်က အရင်က ရမ်ဘို ကြည့်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျ။ ညရှုခင်းတွေမှာ ရမ်ဘိုကလည်း မျက်နှာမှာ အမည်းတွေခြယ်ပြီးရိုက်တော့ ဘာမှမမြင်ရဘူး။ ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်က ညကြည့်ကိရိယာတပ်ကြည့်ရမလိုလို ဘာလိုလို။ အခု သွားကြည့်ဖြစ်တာက နအဖ ကို သောက်ညင်ကပ်လို့ တမင်ကို တကူးတက သွားအားပေးတာပါဗျာ။